MgHla's Diary (မောင်လှ ရဲ့ ဒိုင်ယာရီ): March 2010
Tin Tin's Ads
gallery.MgHla.net -မော င် လှ ရဲ့  ဓာ တ် ပုံ ပြ ခ န်း
ကျွန်တော် ဖန်တီးခဲ့သော / ဖန်တီးလျှက်ရှိသော / ဆက်လက် ဖန်တီးမည့် ဓာတ်ပုံ၊ ရုပ်ပုံ၊ လှုပ်ရှားမှု ပုံများ၊ စာသား စသည့် ဖန်တီးမှုများ အားလုံးအားaCreative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License. လိုင်စင် ရယူထားပါကြောင်း အသိပေးအပ်ပါသည်။
Posted by MgHla မောင်လှ at 1:58 pm
၂၀၁၀ ဆိုတဲ့ ခုနှစ်က ကျတော့်အတွက် တကယ်ကို အလုပ်ရှုပ်စေတဲ့ ကာလပဲ... ဘာတွေရှုပ်လို့ ရှုပ်နေမှန်းကို မသိအောင် အလုပ်တွေ လုပ်နေရတယ်... ဒီကြားထဲ မန္တလေးရာသီဥတုက ပူလိုက် အေးလိုက်... ညပူ မနက်အေး ဖြစ်နေတယ်... အခု နေ့လည်ဘက်လည်း မြူတွေဆိုင်းနေပြီး ခါတိုင်း မြင်နေကြ မန္တလေးတောင် ရန်ကင်းတောင်ကိုတောင် လှမ်းမမြင်ရတော့ဘူး...
HP laptop ကို စိတ်နာနေတယ်... ရုံးကပေးထားတဲ့ HP pavilion dv2000 လေး ပြီးခဲ့တဲ့ ၁၀-ရက်ကျော်က screen မှာ ဘာမှ မပေါ်တော့ဘူး... အဲဒီအချိန်တုန်းက ရုံးက အင်တာနက်လစဉ်ကြေး မဆောင်လို့ အင်တာနက် ဖြတ်ခံထားရတဲ့အချိန်... ဟိုစမ်း ဒီစမ်း မရတာနဲ့ ဝယ်ခဲ့တဲ့ ရန်ကုန်ဆိုင်ကို ပြန်ပို့ထားတယ်... အင်တာနက် ရလို့ ရှာကြည့်တော့ dv2000/dv6000 series တွေမှာ အပူကြောင့် Nvidia GPU တွေ ခဲလွတ်ပြီး ဒီလို ပြသနာတွေ အဖြစ်များတယ်ဆိုပဲ... HP နဲ့ Nvidia ရဲ့ မကောင်းတဲ့ အကြောင်းတွေ ဖတ်ချင်ရင်တော့ http://www.hplies.com/ မှာ သွားဖတ်နိုင်ကြောင်းပါ...
မန္တလေးမှာ BarCamp Mandalay ဆိုပြီး လုပ်ဖို့ရှိတယ်... အခုမှ စလုံးရေးစ ရေးဖို့ မြေဖြူလိုက်ရှာနေကြတုန်းပါ...
These works are licensed underaCreative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.
» Mandalay Bloggers Feeds Network
... အထောက်အကူပြု ...
» How to put html tagcode in blog (CMSmdy)
» Myanmar Unicode စာလုံးပုံစံ ဖွာတာတာနဲ့ ပေါ်နေလား...?
» Zawgyi-One Font & Keyboard Layout
» မြန်မာလို ဘလော့စရေးမယ်ဆိုရင်...
» Blog မှာ မြန်မာလို ရေးရတာ အဆင် ပြေအောင်...
» eot လုပ်ရအောင်
» Win-2-Zawgyi Font (LilMaster)
» Zawgyi-2-Win Font
» Unicode Converter (.Zip)
MgAlbert (c) Null
သခင်ကြီး @ Ko JL